jhapanews: August 2008
माओवादीले नै नयाँ नेपाल बनाउने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा कोचिला राज्य समिती इन्चार्ज हरिवोल गजुरेलले नयाँ नेपालको निमार्ण माओवादीको नेतृत्वमा सुरु भएको बताएका छन् ।
आज झापाको दमकमा पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको क्षेत्रिय भेलामा बोल्दे उनले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगत आश र त्रास दुबैमा परेको दाबी गरे ।
उनले यथास्थितीवादीहरु माओवादीको नेतृत्वसँग तर्सिएको तर र्सवहाराहरु आशावादी बनेको बताए । उनले भने- नयाँ नेपाल बनाउने जिम्मा माओवादीको काँधमा आएको छ , त्यो जिम्मेवारी हामी कुनै पनि अवस्थामा पुरा गर्र्छौ ।
उनले संविधान लेखनमा बुद्धिजीवीहरुको भूमिका र सुझाव महत्वपर्ूण्ा हुने बताए । अशल संविधान बनाउन र त्यसको प्रभावकारीताको लागि बुद्धिजीवीको सुझाव अपरिहार्य छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी पार्टी झापा इन्चार्ज सन्देशले नयाँ नेपाल निमार्ण गर्ने कार्य सबै नेपालीको भएको बताए । उनले अहिले देखिएका केही राजनैतिक गतिरोधहरुलाई आधार बनाएर आफ्नो पार्टीको सफलता र असफलताको अड्कलवाजी गर्ने काम गलत भएको बताए ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी डा केपी सुवेदी, नागरिक समाज दमकका अध्यक्ष कमल जंगली, प्राध्यापक उत्तम भट्टर्राई लगायतले बोलेका थिए ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 3:33 AM No comments:
अवीरल वर्षापछि झापाको कन्काई, रतुवा, बनियानी र कमल खोलामा आएको बाढीले दक्षिण पश्चिमी झापाका दर्जनौ गाउँ जलमग्न भएका छन् ।
दक्षिणी झापाको शिवगंज, पाँचगाछी, कोरोवारी, महाभारा, महेशपुर, तोपगाछी, धरमपुर र दमक नगरपालिकका धेरै भागमा बाढीको पानी पसेको छ ।
कन्काई र कमलखोमा आएको बाढीका कारण बनेको भंगालोले महाभारा गाविसको वडा नं ५ को बाहिरी संर्म्पर्क विच्छेद भएको छ । पूर्व गाविस अध्यक्ष विजय अग्रवालका अनुसार महाभराको ४ नम्वर वडाको बालुवाडीमा बाढीको पानी पसेको छ । त्यो वडाबाट एक साता अघि बीस परिवार विस्थापित भएका थिए ।
शिवगंजको वडा नं ६ र ८ मा सातासीखोलाले कटान शुरु गरेको छ । त्याँ वडा नं ६ का तीस परिवार विस्थापनको खतरामा रहेको शिवगंज प्रहरीले जनाएको छ । धरमपुर र तोपगाछीमा कमल खोलको पानी पसेको स्थानियवासीले बताएका छन् ।
दमक नगरपालिकको वडा न १० मा रहेको दीपिनी खोलाको पानी सुकुम्वासी वस्तीमा पसेपछि दर्जनौ परिवार सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् । खोलको पानीले वडानं १३ को सुकुम्वासी वस्तीपनि डुवाएको छ । रतुवा खोलाको पानी पस्दा वडा नं १९ को जहदा लगायत भाग जलमग्न बनेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले कतिपय बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिएको छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 12:39 AM No comments:
गरिव सन्थालका करेसामा कहिले बन्ने पाईखाना................
झापा कोरोवारी १ तुलाचनका होप्ना मर्डी परिवार पक्की पाईखानामा दिशा पिसाव विर्सजन गर्छन् । उनको परिवारले दुइ वर्ष यता पाईखानामा दिशा पिसाव गर्न थालेका हुन् । तर उनी बाहेक सिंगो कोरोवारी गाविसमा पाइखानामा दिशा पिसाव गर्ने सन्थाल एकजना पनि छैनन् ।
तुलाचनको सन्थाल वस्तीमा रहेका ३५ घर सन्थाल मध्ये होप्ना र उनको परिवार मात्रै पाइखाना प्रयोग गर्छन । छिमेकी सुक्रु बेस्राले भने-पैसा नभएकोले कसैलेपनि पाईखाना राख्न सकेका छैनन् । साँझ विहान छाक टार्नै धौ धौ छ कसरी राख्ने । उनका तीन जना परिवारका सदस्य खुला चौर र खेतका कान्लामा साँझ विहान दिशा पिसाव गर्न जान्छन् । होप्नाले चाँही विदेशमा गई कमाई ल्याएको पैसाले पाईखाना बनाएका हुन् ।
भारत सिमावर्ती कारोवारीमा सबैभन्दा धेरै चार हजार सन्थालको बसोवास छ । तर कसैले पनि चर्पिमा दिशा पिसाव नगर्ने गरेको स्थानिय शिक्षक भोला खतिवडाले बताए । अरु ठाउँमा गरिवका नाममा सरकारी, गैह्रसरकारी र त्यस्तै संस्थाले सरसफाईका लागि कार्यक्रम चलाएका भएपनि कोरोवारीका सन्थाललाई लक्षित गरेर कसैलेपनि काम नगरेको उनले गुनासो गरे ।
कोरोवारी गाविसमा तुलाचन बाहेक सन्थालको बाहुल्यता रहेको लालमाटी र दासचौरीमा पनि पाईखानामा दिशापिसाव गर्ने चलन छैन् । त्यो टोलका बासिन्दापनि खेतकै कान्लामा दिशा गर्न दर्गुछन् । स्थानिय सरिता मुर्मुले भनिन-बनिवुतो गरेर जीवन चलाउनेले कसरी पाइखाना बनाउनु र र ? उनले धेरै सन्थालहरु ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकोले पनि समस्या रहेको बताइन् । यो जातिमा अहिलेपनि आफ्ना परिवारका जेठा सदस्यले दिशा पिसाव गरेको एउटै स्थानमा सानाले गर्न हुन्न भन्ने मान्यता रहेको उनको कथन छ ।
सन्थाल समूदायमा खुला स्थानमा दिशा पिसाव गर्नाले उब्जन सक्ने रोगका विषयमा पनि चेतना छैन् । झापामा २६ हजार सन्थालको बसोवास रहेको सन्थालका लागि कार्यरत संस्थाको दाबी छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 6:15 AM No comments:
सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका चिकित्सक सहदेव थुलुङको परिवारलाई क्षतिपूर्ती दिनपर्ने माग गर्दै आजपनि दमकमा यातायात अवरुद्ध गरिएको छ ।
विहानै देखि सडकममा जम्मा भएका युवाले सडकमा यातायातका साधन चल्न दिएका छैनन् । पूव पश्चिम राजमार्गको दमक खण्डमा यातायात बन्दका कारण भारत तर्फसामान बोकेर हिंडेका सयौं मालवाहक ट्रक अलपत्र परेका छन् ।
निजी कारमा सवार थुलुङको असार ३० गते मोरङको दुलारीमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । धरानका हिरा उदासको बसले ठक्कर दिदा उहा“को मृत्यु भएको परीवारले बताउदैं आएका छन् । क्षतिपूर्तिको विषयमा आज मोरङको बेलवारीमा वार्ता भईरहेको आन्दोलन समितीका संयोजक लोकसागर सम्वाले बताउनु भयो ।
झापा र मोरङका ६ वटा शिविरका भुटानी शरणार्थीलाइ परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य संम्पन्न भएको छ ।
शरणार्थी मामिला सम्बन्धि राष्ट्र संघीय उच्चायोग र गृहमन्त्रालयका पतिनिधिले दमकको बेलडा“गी १,२ र ३ तथा शानिश्रे,खुदुनावारी र टिमाई शिविरमा वितरण पुरा गरेका हुन् । पछिल्लो पटक टिमाईका ९ हजार ८ सय शरणार्थीलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको वितरण टोलीका संर्म्पर्क अधिकृत बसन्तराज पुरीले बताउनु भयो ।
१६ वर्षमाथिका शरणार्थीलाई व्यक्तिगत परिचयका लागि पत्र वितरण गर्न थालिएको हो । सातै शिविरका ६० हजार बढी शरणार्थीले परिचय पत्र पाउने बताइएको छ ।
सप्तकोशीका बाढी पीडितको राहतका लागि झापाको दमकमा राहत संकलनको कार्यलाई तिव्रता दिइएको छ ।
स्थानिय गन्तब्य थिएटरले सडक विभिन्न स्थानमा सडक नाटक गरि राहत जुटाएर सहयोग संकलनको कार्य अघि बढाएको छ ।
क्लाकारहरुले आजबाट समावेशी नाटक प्रदर्शनी गर्ने संस्थाका उपाध्यक्ष इन्द्र सुब्बाले बताउनु भयो । यसै गरि नेपाल औषधि व्यवसायी संघले , दमक नगरपालिका, अखिल क्रान्तिकारी, मोडल कलेजले पनि राहत संकलनलाई तिव्रता दिइ रहेका छन् ।
संकलित सहयोग कोशी गएर पीडितलाई दिइने ती संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 4:30 AM No comments:
३ महिनादखि भारतको क्लिनिकमा बन्धक
भूटानी शरणर्थी शिविर बेलडाँगीकी एक महिला उपचार गरेको खर्च तिर्न नसक्दा ३ महिनादखि क्लिनिकमा नै बन्धक बनेर बस्न बाध्य भएकी छन् ।
बेलडाँगी २ निवासी तुलमाया गुरुङ भारतको सिलिगुडी स्थित डा.चाङको क्लिनिकमा यसरी बन्धक बनेकी हुन । उपचार गर्दा भएको खर्च २ लाख रुपैया तिर्न नसकेपछि त्यहीँ बस्नु परेको आफन्त महेन्द्र गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
घरायसी बिवादका कारण आफ्नै श्रीमानले चिरपटले टाउकोमा प्रहार गरि गम्भिर घाइते बनाएपछि तत्काल उपचारको लागि दमकस्थित आम्दा अस्पतालमा लगिएको थियो । तर आम्दा अस्पतालमा उपचार सम्भब नहुने भएपछि उक्त अस्पतालले डा. चाङकहाँ लैजान रिफर गरेको थियो ।
यसरी बन्धक भएर बस्नु परेपछि उनका आफन्तले युएनएचसीआर लगायत अन्य संघ संस्थाहरुमा समेत सहयोगको माग गर्दा पनि कसैले केही नदिएपछि अहिले टाउकोमा लागेको चोट निको भए पनि तुलमाया मानसिक रुपमा असन्तुलित अवस्थामा नै दिन बिताइ रहेकी छिन् । यता कुटपिट गरेको आरोपमा श्रीमानलाई भने कारवाइका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रपुरमा राखिएको छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 2:02 AM 1 comment:
माओवादी शिविरमा लालसेना समायोजनको तयारी
संविधान सभा निर्वाचन अघिसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका जनमुक्ती सेनाहरु फुर्सदमा थिए । शिविरहरुमा उनीहरुको दैनकी सामान्य रुपमा बित्ने गरेको थियो । शिविर भित्रैका भौतिक पुर्वाधार निमार्णका लागि सामान्य श्रम गर्नु, सेण्ट्री बस्नु, आफ्ना इकाईका साथी भाइसँग “इनडोर गेम” क्याराम बोर्ड, चेस, लुँडो, बाघचाल खेल्नु, पालो प्रथामा आफैं खाना बनाएर खानु बाहेक माओवादी सेनाले खासै केही गर्ने गरेका थिएनन् । तर आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि शिविरको रौनक नै भिन्न बनेको छ ।
शिविरका माओवादी सेनाले संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टीको विजय र नयाँ सरकार गठनसँगै सन्तुष्टिको श्वास फेर्न थालेका छन् । निर्वाचन अघिसम्म भविष्यप्रति चिन्तित उनीहरुलाई पार्टीको विजयले निश्चिन्त बनाई दिएको छ । राष्ट्रिय सेनामा समायोजन हुनका लागि विगतमा पनि तयार रहेका जनसेना अहिले त्यही कार्यकालागि तयारीमा जुटेका छन् । जनसेनाका सबै मुख्यालय तथा मातहतका सहायक शिविरहरुमा सेना समायोजनको तयारी तिव्रताका साथ भईरहेको छ ।
झापाको केर्खाबाट डेढ किलोमिटर उत्तर इलामको चुलाचुली १ स्थित कमलझोडाको कमलखोला फाँटमा रहेको जनसेनाको प्रथम डिभिजन मुख्यालय र मातहतका तीनवटा सहायक शिविरहरु मोरङको टाँडी र याङशिला तथा इलामको दानावारीमा सेना समायोजनमा शारिरीक र मानसिक रुपमा दक्ष बन्न एक महिनादेखि विशेष सैन्य तालिम भईरहेको छ । मुख्यालयको कार्यालय बिग्रेडका साथै रत्न सकुन्त, विप्लव सृजन र छिन्ताङ सुखानी बिग्रेड पहिलो डिभिजन अर्न्तगत पर्छन ।
यस अघि शिविरमा सामान्य कवाज, परेड र खेलकुद मात्र हुने गरेको थियो । यद्यपि शिविरभित्र फुर्सद मिल्दा नजिकका गाउँमा गई माओवादीका सेना गाउँलेका काम गर्न समेत पछि पर्दैन थिए । बाटोघाटो, पुलपुलेसा बनाउन र स्वास्थ्य शिविर चलाउन उनीहरु शिविर बाहिर निस्कन्थे । तर एक महिना यता भने उनीहरु आफ्नैलागि व्यस्त बनेका हुन् ।
माओवादीकै भनाईमा आफूँलाई व्यसायिक सेना बनाउने कार्यको पहिलो चरण अर्न्तगत क्षमता अभिवृद्धि गर्नकालागि तालिम शुरु गरिएको हो । चुलाचुली मुख्यालका सहकमाण्डर पावेलले लाल सेनालाई व्यवसायिक सेनामा रुपान्तरण गर्नकालागि विशेष सैन्य तालिम एफसी विसी शुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार व्यवसायिक सेनालाई चाहिने आधारभुत देखि सबै किसीमको क्षमता अभिबृछ यो तालिमबाट मिल्छ । भन्छन्-यस्लाई विशष सैन्य तालिम भनिन्छ । शारिरीक र मानसिक दुबै रुपमा सेनालाईलाई दह्रो बनाउन तालिम महत्वपर्ण छ । लडाँइ लड्दा र जनतासँग घुलमिल हुन जाँदा अपनाउन पर्ने रणनीति दुबै विषयम ज्ञान दिने गरिएको उनले बताए ।
शिविर स्थापना हुदाँ र त्यपछिका केही समयसम्म पनि जनसेनाको दैनिकी उत्ति साह्रो कडा थिएन् । तर हिजोआज शिविरको अनुशासनमा कर्डाई गरिएको छ । जनसेनाहरु विहान ६ घण्टा र साँझ ३ घण्टा शारिरकी व्यायाम गर्छन । यहि अवधिमा उनीहरुले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सैन्य ज्ञानपनि लिन पर्छ ।
जनसेनाले ४ बजेबाट आफनो दैनिकी आरम्भ गर्नुपर्छ । ओच्छ्यान छाडेपछि उनीहरु नित्यकर्म पट्टी लाग्छन् । दिशा पिसा गरेर दौडकालागि तयार रहनु पर्छ । ५ बजे शुरु हुने दौड ६ बजेसम्म चल्छ । शिविर भित्रै र बाहिर बुट बज्जार्दै गरिने दौड लगत्तै ८ बजेसम्म पिटी परेड हुन्छ । ८ बजेदेखि १० बजेसम्मको कक्षा जनसेनाकोलागि केही परिवर्तित हो । यस अविधिमा पार्टको हेडक्वार्टरमा प्रशिक्षित सैन्य कमाण्डरहरुले हतियार चलाउने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिन्छन् । यहि समयमा युद्धकलाका कक्षापनि हुने गरेका छन् । यसलाइ एफसीविसी-फिल्डा क्राफ्ट र ब्याटल क्राफ्ट) नाम दिइएको छ ।
चुलाचुली मुख्यालय र मातहतका तीन शिविरमा चार देखि पाँच जना विशेष प्रशिक्षकले यो तामिल दिदैं आएका छन् । चुलाचुली मुख्यालयका एकजना जनसेनाले बन्दुक पड्काउने, मार हान्ने, मर्मत गर्ने, विष्फोटक विच्छाउने, लडाँइमा दुष्मनबाट छलिने, दुष्मनलाई प्रहार गर्ने, विष्फोटक निष्कृय पार्ने,जनतासँग मिलेर काम गर्ने, उनीहरुको मन जित्ने तौर तरिका, दैविक विपत्तीमा सहयोग गर्दा अपनाउन पर्ने सावधानी आदि सबै विषयको ज्ञान आफँूहरुले पाईरहेको बताए । उनले भने-यो कक्षा भने हाम्रा लागि नौलो हो । युद्धकालमा दुष्मनका गौडा हान्ने र लडाँइमा बच्ने तरिकाको विषयमा मात्र प्रशिक्षण दिने गरिएको थियो ।
विहान १० बजेको युद्धकला कक्षापछि जनसेनाको बिहानको दैनिकी पुरा हुन्छ । ११ बजेसम्म खाना खाएर कोही शिविरको छाप्रोमा झकाउँछन् । पत्रिका पढ्नेहरु लाईब्रेरीतर्फ लाग्छन् । गीत सुन्ने र टेलिभिजन हेर्नेहरु भने कार्यालय र छाप्रा भित्र पस्छन् । त्यसो त शिविरमा जनसेनाकालागि सामान्य स्तरका सबै सुविधा उपलब्ध छ ।
सह कमाण्डर पावेलको भनाईमा जनयुद्धका बेला, क्याण्टोनमेण्टको बर्साई क्रममा र समाजोनका लागि गरिएका सबै सैन्य तालिमको प्रकृति समान मानिन्छन् । अहिले जनमुक्ती सेनाले व्यवसायिक सेनाले गर्ने फिल्ड क्राफ्ट र ब्याटल क्राफ्ट नामका तालिम मात्र गरेका हुन् । पावेल भन्छन्-हामीले युद्धका बेलापनि तालिम दिने क्रमलाई निरन्तरता दिएकै हो ।
चुलाचुली डिभिजन मुख्यालयका सैन्य सचिव नरेश भन्छन्-सैन्य व्यवसायिकताकालागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार तयार हुदैंछन् । संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीको जितले जनसेनामा थप उत्साह थपिएको बताउँदै उनले भने-माओवादीको जितले सेना समायोजनका लागि सकारात्मक ढोका खोलि दिएको छ । हाम्रा सेना अन्तराष्ट्रिय सेनामा हुनपर्ने गुणको विकास गर्न लागिपरेका छन् । अहिले सम्मको माओवादीको जितले नेपाली सेना र जनसेनाको समायोजन चाँडै हुनेमा विश्वास बढ्दै गएको उनको दाबी छ । उनले समायोजनाका लागि शारिरीक र मानसिक तयारी गर्न जनसेनाले कुनै कसर बाँकी छाडेका छैनन् । भन्छन्-हिजो युद्धकालको जस्तै मेहनत गरिरहेका छन् हाम्रा लाल सेनाले ।
तालिमका लागि हामीसँग शिविरहरुमै सबै पूर्वाधार भएकोले पनि सहज भएको छ -उनले भने ।उनका अनुसार जनमुक्ती सेनाले अहिले तालिममा ध्यान केन्द्रीत गरेकोले जनपक्षिय कामबाट भने अलग्गै बस्नुपर्ने अवस्था अएको छ । पावेलले भने-अहिले सबैको ध्यान तालिममा केन्द्ति भएको छ । उनीहरुले शिविर रहेको आसपासको क्षेत्रमा चलाउने स्वास्थ्य शिविर, विकास निमार्ण कार्यलाई हाल थाँति राखिएको पावेल बताउँछन् ।
दिउँसोको विश्रामपछि जनसेनाले अपरान्ह ४ बजे खाजा चिया सकाएर फेरि कक्षामा निस्कनु पर्छ । ६ घण्टा लगाएर विहानी समयामा जनसेनाले सिकेका शारिरीक व्यायाम र सैद्धान्तीक ज्ञानको परिक्षण ३ घण्टामा हुन्छ । यो परिक्षण दैनिक चल्ने क्रियाकलापमा पर्दछ । आर्थात साँझ ७ बजेसम्म शैन्य कक्षामा सिकेका कुरा कमाण्डरले सोधे अनुसार जवाफ दिनुपर्छ ।साथीभाईले पनि कक्षामा सवाल जवाफ गर्छन । विशेष गरि कक्षामा लडाँइ, मार्च पास, सलामी गर्ने तौर तरिका देखि लिएर हतियारका विभिन्न भागको नामसम्म सोध्ने गरिएको दानावारी सहायक शिविरका एक जनसेना बताउँछन् । उनका अनुसार प्रशिक्षकले शैन्य सम्बन्धि हाजीर जवाफ पनि हुने गरेको छ ।
यस्ता कक्षा चलाउन चुलाचुली मुख्यालय र मातहतका सहायक शिविरहरुमा हलकै व्यवस्था गरिएको छ । ती हलहरुमा समूहमा बसेर जनसेनाले कक्षा लिनु पर्दछ ।
माओवादी जनसेनाको समायोजनको लागि शिविरहरुमा शैन्य कक्षा चलिरहँदा चुलाचुली र मातहतका सबै जनसेनाको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने कार्यपनि संम्पन्न भएको छ । जेठ पहिलो साता सहायक शिविरबाट ट्रका राखेर ल्याइएका जनसेनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको थियो । जर्मन सहयोग नियोग जिटीजेड र सुष्मा कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानको सहयोगमा एक हप्तासम्म चुलाचुलीमा शिविर नै चलाएर जनसेनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हो । यद्धपि मुख्यालयले भने नियमित स्वास्थ्य जाँच भन्ने गरेको भएपनि शिविरमा युद्धका बेला र्घाईते भएका कतिपय जनसेनाको शल्यकृया समेत भएको थियो ।
मुख्यालयले आफूँ मातहतका सहायक शिविरमा समेत गरि एक सय जना जनसेनाको शरिरबाट अहिले पनि गोली झिक्न बाँकी रहेको जनाउँदै आएको छ ।
प्रथम डिभिजन मुख्यालय र मातहतका सहयाक शिविरमा तीन हजार दुइ सय २१ जनमुक्ती सेनाको दर्ता छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 10:29 PM No comments:
ज्ञानेन्द्रको कम्पनीले कर तिर्न अटेर गर्यो
दमक झापाको दमक स्थित हिमालय गुडरिकले नगरपालिकालाई बुझाउन अटेर गरेको छ ।
गुडरिकले एकिकृत संम्पती कर बापत दमक नगरपालिकालाई सत्र लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
रकम बुझाउन आग्रह गर्दा बेवास्ता गरेको बताउँदै दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडाले भन्नुभयो-पाँच पटक त नगरपाकिलाले वार्ता नै चलाई सक्यो । कयौं पटक चिठी पठायौं तर बास्तै गरेनन् ।
उहाँका अनुसार उस्ले साउन पहिलो साता भित्रमा नगरपालिकामा कर बुझाउने भन्ने आश्वासन दिएको थियो । तर अहिले माथिको निर्देशन आएपछि मात्र रकम बुझाउने भनेर कर्मचारीले बताएको खतिवडाले जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो- अब माथि कस्लाई भन्नु पर्ने हो हामीलाई पनि समस्या भएको छ ।
वि.स. २०६२ सालमा सरकारले एकीकृत संम्पती कर लागू गरेपछि कमानलाई करको दायरा ल्याउने नगरपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।
कमानले एकिकृत संम्पती करमात्र बाषिर्क ३ लाख ६० हजार बुझाउन पर्छ । तर वर्षोनी नबुझाएकोले जरिवाना समेत बढ्दा तिनुपर्ने रकम अधिक भएको छ ।
नगरपालिकाका अुनसार कमानले संम्पती मूल्याँकनको विषयमा चित्त दुखाएर कर बुझाउन नआएको हो । ५ सय ७६ बिघाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको चिया बगान, मिनी दरवार र अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याँकन नगरपालिकाको नगरपरिषदको निर्णय २० करोड गरिदिएको छ । तर कमानले भने १६ करोड मात्र हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
पूर्व राजा महेन्द्रले आफ्ना भाई हिमालयको नाममा सो चिया बगान २०१८ सालमा स्थापना गरेका थिए । पूर्व राजशाहीको सम्पतीको रुपमा नगरपालिकामा रहेको भएपनि त्यसभित्र रहेको भवनहरुको नक्सा पास समेत गरिएको छैन ।
बगान क्षेत्रमा र्सवसाधारणले प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । गणतन्त्र स्थापना अघि त्यहाँ रहेको दरवारमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तथा अन्य सदस्यहरु विश्राम गर्न आउने परम्परा थियो ।
कमानका जिएम बि गुरुङले आवश्यक छलफल पछि आफूँहरु कर तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यस विषयमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि भनिसकेको जानकारी दिनु भएको छ ।
लालपूर्जा भोलि देखि
दमक झापाको दमक १३ मा अबरुद्ध जग्गाको लालपूर्जा वितरण कार्य पुन सुचारु हुने भएको छ ।
मंगलवार दमकमा बसेको दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीको र्सवपक्षिय छलफलले बुधवारदेखि लालपूर्जा वितरण थाल्ने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
केही भूमाफियाहरुले स्थानियवासीलाई लालपूर्जा दिने भन्दै रकम उठाएको र्सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले २ नम्वर नापी कार्यालयबाट कागजात जफत गरको थियो । कागजात जफतपछि वितरण कार्य अबरुद्ध बनेको थियो ।
मंगलवार भएको छलफलले वितरण सुचारु गर्ने सहित सात बुदा“मा सहमती जुटाएको छ । अख्तियारले जफत गरेका कागजात फिर्ता गर्न जिल्ला प्रशासनमा पहल गर्ने, विरतणका क्रममा समस्या आए राजनीतिक दलको सम्यन्त्रले सुल्झाउने, कानुनी प्रकृया पर्ुयाउने सिलसिलामा विवादित विषयमा दलले नै मिलाउने, कर्मचारीलाई काम गर्न सहयोग गर्ने र १३ नम्वर वडा पछि अन्य वडामा कानुनी रुपमा लालपूर्जा वितरण थाल्नेपनि सहमती भएको छ ।
लालपूर्जा वितरण प्रकृयामा कसैले व्यवधान गरे पक्राउ गरि सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा लगाउने र सरकारी राजश्वमा मात्र लिएर पारदर्शी ढंगले काम गर्ने विषयमा सहमती भएपछि बुधवार देखी नापी टोलीले काम गर्ने ७ नम्वर नापीका प्रमुख विष्णु न्यौपानेले बताउनु भयो । लालपूर्जा वितरण पछि मालपोतलाई तत्कालै श्रेस्ता बुझाईने उहा“ले जनाउनु भयो ।
दमकमा तीन घण्टा चक्का जाम
दमक सडक दर्ुघटनामा मृत्यु भएका चिकित्सक सहदेव थुलुङको परिवारलाई क्षतिपर्ूर्ती उलब्ध गराउन पर्ने माग गर्दै मंगलवार झापा दमकमा तीन घण्टा सडक जाम गरिएको छ ।
गत असार ३० गते मोरङको दुलारीमा को १ ख १८७७ नम्वरको यात्रु बसले ठक्कर दिदा“ निजी कारमा यात्रारत दमकका चिकित्सक थुलुङको घटना स्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
उनको मृत्यु भएको लामो समयपछि वस मालिक धरानका हिरा उदासले चासो नदिएको भन्दै दमकमा र्सवपक्षिय बैठकले किरा“त र्राई यायोख्खाका झापा अध्यक्ष सन्तकुमार बान्तवाको संयोजकत्वमा संर्घष्ा समिती गठन गरेको थियो ।
समिती मातहतका युवाले मंगलवार पर्ूव पश्चिम राजमार्गको दमक खण्डमा मध्यान्न १२ देखि अपरान्ह ३ बजेसम्म सडकमा यातायात बन्द गराए । माग पुरा नभए बुधवारबाट यातायात बन्दलाई निरन्तरता दिईने आन्दोलन समितीका संयोजक लोकसागर साम्बाले बताउनु भयो ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 4:15 AM No comments:
सागसब्जी छोइनसक्नु भयो
दमक/ लगातारको बन्दले झापामा सागसब्जीको मूल्य पचास प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ । कतिपय पुर्वी सहरमा सहरमा उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव शुरु भएको छ ।
यातायातका साधन चल्न छाडेर ढुवानी हुन नसक्दा अति उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
झापामा पाच दिन यता धनकुटा र धरानबाट सब्जी ढुवानी हुन नसकेको व्यवासीले बताएका छन् - पसलमा सब्जी छैन्, यस्तै हो भने भोलिदेखि आलु र प्याज पनि नपाउने अवस्था छ दमकका एकजना पशलेले भने ।
केही समय अघिसम्म प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा विक्री हुने बन्दाकोबी रु ५०, रु ३० को खुर्सानी १ सय , २० को प्याज ३२, १० को आलु १५ र रु ८ को पर्वल १६ रुपैया“ प्रतिकेजी भएको छ । अन्य सब्जीको मूल्य पनि दोब्वर भएको छ ।
दमकमा छिमेकी गाविसबाट भित्रने साग सब्जीपनि आउन छाडेको व्यवसायीले बताएका छन् । यहा“ गौरादह, सतासीधाम, धरमपुर, लखनपुर , गौरीगन्ज , महारानीझोडा लगायत गाविसबाट सब्जी आउने गरेको बताउ“दै अर्का व्यवसायी भन्छन्- बजारमा टमाटर पाउन छाड्यो । अरु वस्तुको मौज्जात पनि छैन् ।
ग्यासको अभाव भएको एकसाता नै भइसक्यो। पेट्रोल विभिन्न पशलहरुमा दुइ सय रुपैया प्रतिलिटर बिक्री भई रहेको छ । यहाँ बिक्री हुने पेट्रोल भारतीय बजार सिलीगुडी र पानीटंकीबाट ल्याउने गरिएको छ । बजारमा ग्यासको समेत हाहाकार छ । दमक बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी नविन अधिकारीले ग्यास सकिएर ट्याङको रित्तिएको एकसाता वित्न लाग्दापनि नपाएको बताए ।
पाच दिन देखिको बन्दका कारण भुटानी शरणार्थीलाई सहयोग गरिरहेका संस्थाले प्रहरी सुरक्षामा उपभोग्य वस्तु दमक भित्राएका छन् । यसैबीच जारी बन्दलाई चालक परिचालक संघ दमकले र्समर्थन गर्दै व्यवासीको माग प्रति सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ती प्रकासित गरि संघले त्यस्तो माग अघि सारेका छन् ।
दमक/ नगरपालिका क्षेत्रमा रहेर पनि झापाको दमक १६ स्थित टुकुरे झोडाका बासिन्दा रातमा टुकी बाल्न बाध्य छन् ।
त्यहाँ विद्युत विस्तारका लागि नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरण लाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको स्थानिय झरुराज ढकालले बताउनु भयो ।
त्यो टोलका २७ परिवार विद्युत विस्तार नभएकोले समस्यामा रहेको उहा“ले बताउनु भयो । विद्युतले आगामी वर्षो योजनामा मात्रै त्यहाँ विद्युत विस्तार गरिदिने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।
दमक/ झापाको दमक, सिमावर्ती गाविस र इलामको चुलाचुली क्षेत्रमा ज्वरोका रोगीहरुको बढेका छन् ।
गर्मी सँगै ती क्षेत्रमा अन्य रोग भन्दा तुलनात्मक रुपमा ज्वरोका रोगी बढेका हुन् । चुलाचुलीको माओवादी डिभिजन मुख्यालय र मातहतका शिविरमा पनि ज्वरोका रोगी बढेको मुख्यालयले जनाएको छ ।
आम्दा अस्पतालका चिकित्सक डम्बर दासले अन्य रोगीको तुलनामा ज्वारोका रोगीको संख्या अलि बढी भएपनि प्रकोपको रुपमा भाइरल भिवर भने नफैलिएको बताउनु भयो ।
शरणार्थीको दर्ता शुरु दमक/ छुटेका भुटानी शरणार्थीको रजिष्ट्रेसन कार्य आउँदो भदौ २ गतेबाट शुरु हुने भएको छ । भुटानबाट नेपाल आएका र शरणार्थी मान्यता नपाएका एक हजार ५ सय जनाले रजिष्ट्रेसन कार्यका लागि निवेदन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारी बशन्तराज पुरीले उनीहरुले रजिष्ट्रन पछि मात्र शरणार्थीको मान्यता पाउने छन् । अहिले झापा र मोरङका शिविरमा एक लाख ५ हजार शरणार्थी बस्दै आएका छन् ।
शरणार्थीको दर्ता शुरु
दमक/ छुटेका भुटानी शरणार्थीको रजिष्ट्रेसन कार्य आउँदो भदौ २ गतेबाट शुरु हुने भएको छ । भुटानबाट नेपाल आएका र शरणार्थी मान्यता नपाएका एक हजार ५ सय जनाले रजिष्ट्रेसन कार्यका लागि निवेदन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारी बशन्तराज पुरीले उनीहरुले रजिष्ट्रन पछि मात्र शरणार्थीको मान्यता पाउने छन् । अहिले झापा र मोरङका शिविरमा एक लाख ५ हजार शरणार्थी बस्दै आएका छन् ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 4:55 AM No comments:
इलाम र झापामा अल्पसंख्यामा रहेका लेप्चा समूदायले आफ्नो जातिय उत्थानका लागि आफैं अभियान चलाउन सुरु गरेका छन् । पहिले शिक्ष त्यसपछि रोजगारी अभियान नाम दिएर उनीहरुले जातिय हितका लागि यस्तो अभियान चलाएका हुन् । प्रस्तुत छ यस विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट । सुन्नको लागि यहाँ राइट क्लिक गरि सेभ टार्गेट गर्नुहोस् ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 4:50 AM No comments:
धन्दावाल समातेर धन्दा रोकिए पो ...............
पूर्वका प्रमुख सहरी क्षेत्रका होटलमा युवतीहरु राखेर अवैध यौनधन्दा चलाउनु सामान्य मानिन्छ । इटहरी, धरान, विर्तामोड त यो धन्दाका लागि गनिएकै सहर थिए । तर केही समययता दमकमा पनि यो व्यवसायले फष्टाउने अवसर पाएको छ ।
दमकका होटल र रेष्टुराहरुमा प्रशस्तै युवतीले गैह्रकानुनी रुपमा धन्दामा सहभागिता जनाएका छन् । केही अघि एउटा होटल यस्तै धन्दा चलाएको पुष्टी भएपछि बन्द नै भयो । आज अर्को होटलबाट युवती सहित संचालिका पक्राउ परेपछि युवतीहरु राखेर अवैध यौन धन्दा सञ्चालन हुने गरेको पुष्टी नै भएको हो । तर पक्राउ र प्रहरीको निगरानी र छापा मार्ने क्रमसँगै युवतीले होटल फेर्ने दृष्टान्तसँग प्रहरी पनि अनभिज्ञ छैन् ।
आज समातिएकामा दमक १२ स्थित बसपार्कको श्रद्धा होटलकी सञ्चालिका ममता शिवाकोटीको, होटलमा कार्यरत ४ युवती र २ युवा छन् ।
झापा धरमपुर ६ का अमर रसाइलीकी १२ वर्षीया छोरी गत साउन २१ गतेदेखि घरबाट हराएको र उनी श्रद्धा होटलमा राखिएको थाहा पाएपछि परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए ।उजुरीका आधारमा प्रहरीले होटलमा निरिक्षण गर्ने क्रममा अवैध यौन धन्दा सञ्चालन गराउने गरेको खुल्न आएपछि उनीहरु लाई पक्राउ गरिएको हो । तर रसाइलीकी छोरी कहाँ छिन भन्ने केही थाहा छैन् ।
अमरले छोरी अपहरणमा परेको सुनाई रहँदा म पनि अरु संचारकर्मी सँगै थिए । उनले हामीलाई पनि छोरी हराएको मनिलो स्वरमा सुनाई रहेका थिए । केही दिन पहिले यस्तै घटना भएको थियो इलाका प्रहरी कार्यालयमा । एउटी १५ वषिर्या युवती धन्दामा लागेपछि आमा चाँहिले छुर्टाई दिन भन्दै छोरी लिएर प्रहरीकोमा गएकी थिइन् । होटल संचालकलाई पनि प्रहरी कार्यालयमा बोलाई छलफल भएको थियो तर के सहमती भयो कुन्नी ती सानी, पातली नानी मैले फेरि साविककै होटललमा देखेको थिएँ ।
जे जसरी र जुन बहानामा भएपनि दमका यौन व्यवसाय फष्टाएको छ । प्रहरीले एकातिर छापा मारेर युवती पक्राउ गरि दुइ दिन खोरमा राखेर छाड्छ होटल परिर्वतन गर्छन अनि धन्दा सुरु भईहाल्छ । प्रहरीले अनुगमन समिती बनाउन साता अघि गरेको सहमतीपनि कार्यान्वय हुन सकेन ।
आज एकाध महिला गएर धन्दा चलाउने शिवाकोटीलाई कार्वाही गर भन्दै प्रहरी कार्यालय घेरे, ढुंगा पनि हाने तर वार्ता गर्ने भनेर साँझमा भिंड आफैं र्साईड लाग्यो ।
आज खाजा खान दमक १३ अर्को एक झुपडपट्टीमा २ साता अघि दमक १० स्थित पाथिभरा खाजा घरमा अवैध यौन धन्दा गर्ने गरेका दुइ जना युवती देखेपछि थाहा भयो यो धन्दालाई लाइसेन्स दिए फरक पर्दैन अब ।
भूटान गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कट्टेल समूहले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुर्नवास कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेको छ ।
मोर्चाका कार्यबहाक अध्यक्ष डिआर कट्टेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा पुनर्वास कार्यमा संलग्न राष्ट्रहरुलाई तत्काल पुर्नवास गतिविधी रोक्न आग्रह गरिएको छ ।
शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल भुटान बीच वार्ताको प्रसंग अघि बढेको अवस्थामा वार्ता नहुन्जेल सम्मका लागि पर्नवास कार्य रोकिनु पर्ने माग गर्दै पुर्नवासमा सघाउदै आएको आइओएम मार्फ अपिल गरिसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भूटानी शरणार्थीको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्वदेश फिर्तीको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै स्वदेश फिर्तीको पहलका लागि सबै पक्ष जुट्नु पर्ने जनाइएको छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 5:18 AM 1 comment:
धरमपुरमा बालिका अपहरित
दमक/पा“च दिन देखि बेपत्ता भएकी आफ्नी १२ वषिर्या छोरी रोशनी रर्साईलीको खोजीमा सहयोग गरिदिन परिवारले संचारकर्मी समक्ष आग्रह गरेको छ ।
बुवा अम्बर बहादुरले आज दमकका स्थानिय संचारकर्मीलाई भेट गरि छोरी खोज्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
गत साउन २१ गते धरमपुर गाविस ६ स्थित घरमा पुगेका दर्ुइ जना अपरिचत युवतीहरुले रोशनीलाई साथै लिएर गएको गाउ“लेले देखेेको पीडित अम्बरले बताएका छन् ।
यसै गरि झापाको दमक स्थित बेलडा“गी शरणार्थी शिविर नजकिै आज भएको सडक दुर्घटनामा परि एकजना बालिका घाइते भएकी छन् ।
त्यहा“ को १ च ५८८ नम्वरको जीपको ठक्करबाट दमक ३ बस्ने सात वषिर्या बालिका संकिता ढकाल र्घाईते भएकी हुन् ।
र्घाईते ढकालको स्थानिय आम्दा अस्पतालमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लिम्बुवानको वार्ता प्रस्ताव
दमक/लिम्बुवान भोलेन्टिर्यर्सले झापाको विर्तामोड स्थित निमार्ण व्यवसायी संघको कार्यालयमा गरेको तोडफोडको घटनामा विषयमा वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
आज संगठनका उपसंयोजक तेन्धङ्हाङले विज्ञप्ती प्रकासित गरि अस्ती संघको कार्यालयमा भएको घटनाको विषयमा सम्बन्धित पक्षस“ग वार्ताका लागि आफ्नो संगठन तयार रहेको जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तीमा २४ घण्टा भित्र वार्ता गरि समस्या समाधान गर्न भनिएको छ । विज्ञप्तीमा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाई माग गर्दै तेन्देङहाङले लिम्बुवान भुमीमा रहेका घोटाला संस्थाहरुलाई सही बाटोमा ल्याउन लिम्बुवान भोलेन्टिर्यर्सहरु तयार रहेको उल्लेख छ ।
कबोल गरेको चन्दा नदिको भन्दै लिम्बुवानका कार्यकर्ताले निमार्ण व्यवसायीको कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए ।
एजेण्ट भागेपछि सिंगापुर पढ्न जान तयारी गर्दै गरेका झापा दमकका दुइ जना विद्यार्थी ठगिएका छन् ।
दमक १० का गंगाराम खतिवडा र १३ का ढकेन्द्र भट्टर्राई स“ग दर्ुइ लाख पचास हजार रुपैया लिएर झापा तोपगाछीका प्रकास र्राई र दुरेन लिम्बु भागेपछि उनीहरुले ठगिएको हुन् ।
दमकमा वैदेसिक अध्ययनको लागि कन्सलटेन्सी खोलेका दुबै जना केही समय यता फरार भएपछि पीडितले इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा उजुरी गरि पैसा फिर्ता गर्राईदिन प्रहरीलाई गुहारेका छन् ।
काश्मिरमा नेपालीको बिजोग
भारतको कश्मिरमा बर्डफ्लु फैलिएको हल्ल्ाा चलेपछि त्यहा“ रोजगारीका लागि गएका नेपालहरुको विजोग भएको छ ।
कतिपय श्रमिकलाई स्थानिय प्रहरीले घरबाट बाहिर समेत निस्कन नदिएपछि उनीहरु समस्यामा परेको पीडितले बताएका छन् ।
झापा महाभारा ४ का आमाशु कोचले आज परिवारका सदस्यलाई टेलिफोन गरी आफू“हरु पा“च दिन देखी एउटै कोठामा थुनिएर बस्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
सोही गाउ“का मनोज गोश्वामीले पनि परिवारलाई काश्मिरमा नेपाली जस्तै अन्य कामदार बन्दी जस्तो घरमा थुनिएर बसिरहेको टेलिफोनमा बताएको छिमेकी कृष्ण पोडेलले बताउनु भयो ।
दमक १६ मा विजुली बल्यो
झापाको दमक १६ स्थित शान्ति टोलमा विद्युत विस्तार गर्ने कार्य संम्पन्न भएको छ ।
समूदाय , नगरपालिका र विद्युत कार्यालय दमकको संयुक्त लगानीमा त्यहा“ विद्युत विस्तार भएको टोल विकास संगठनकी अध्यक्ष बेदमाया ढुंगेलले बताउनु भयो ।
तीन लाख रुपैया“को लागतमा विद्युत पोल गाड्ने, तार टा“गने र विद्युत छाड्ने कार्य भएपछि टोलका ४० परिवार लाभान्वित बनेका छन् ।
संयुक्त लगानीमा योजना
झापाको दमक नगरपालिका क्ष्ँेत्रमा चालु आर्थिक वर्षा जगेडा कोष र उपभोक्ताको साझेदारी प्रयासमा ६ वटा योजना पुरा हुने भएको छ ।
नगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार तीन करोड रुपैया“ बजेट रहेका ती योजनामा उपभोक्ताको एक करोड दश लाख रुपैया“ खर्च हुने छ । नगरपालिकाले १५ लाख रुपैया“ उपलब्ध गराउने कार्यकारी अधिकृत पशुपतिराज खतिवडाले बताउनु भयो ।
यसरी साझेदारी रुपमा पुरा हुने योजनामा शहिद स्मृती वन, ट्राफिक मार्ग, सेतुमारी सडक ढल, ल्याण्डफिल साइट र रत्न सामुदायिक भवन रहेका छन् ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 4:49 AM No comments:
अग्राधिकार माग्दै झापामा आदिवासी जनजातिको भेला
दमक , २५ साउन ः झापा, मोरङ र सुनसरीका आदिवासी जनजातिले भव्य रुपमा १४ औं विश्व आदिवासी दिवस मनाएका छन् । तीनवटै जिल्लाबाट शनिवार झापाको दमकमा भेला भएका उनीहरुले संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालमा जनजाति र आदिवासीको अग्राधिकारको व्यवस्था कानुनी रुपमै संस्थागत गर्न माग माग गरेका छन् ।दमकमा निस्कीएको जानजातिको संस्कृति र्याली पछि अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै माओवादीका सभासद विश्वद्धिप लिङ्देनले जातिय स्वायत्तता विनाको अवको गणतन्त्र र्सार्थक नहुने बताए । उनले पिछडिएका जातिले समान रुपमा राज्य संचालनको तहमा पुग्ने अवसर नपाउन्जेल नया“ नेपाल निमार्ण्र्ाासंभव हुने दाबी गरे । कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका सभासद दीपक कार्कीले आफ्ना नागरिकको अधिकार संरक्षण र संस्थागत गर्ने जिम्मा राज्यको हो भने । उनले कुनैपनि वर्ग र समुदायलाई अधिकारबाट बन्चीत गराएर देश विकास संभव नहुने चर्चा गरे । कार्यक्रममा बोल्दै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले इतिहास देखि नै पिछडीएका जनजाती र आदिवासीहरुको अधिकार प्राप्तीको लडार्“इ अहिलेपनि जारी रहेको बताए । उनले आदिवासी जनजातिको अधिकार संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूवान्चल तर्राई आदिवासी जनजाति संघ संस्थाको एलायन्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष कुन्जीविहारी ताजपुरिया, धिकाल जाति विकास संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर धिमाल, दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पशुपतिराज खतिवडा लगायतले र्सवहारा वर्गको उत्थान विना नया“ नेपाल निमार्ण्र्ाार्ने कार्य अधुरो रहने बताए । कार्यक्रममा भाग लिन झापा, मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानबाट धिमाल, गनगाई, मेचे, राजवंशी, थारु, र्राई, मगर, गुरुङ , लिम्बु लगायत जाती प्रतिनिधिहरु दमक आएका थिए । कार्यक्रममा जातिय संस्कृति झल्कने नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
लिम्बुवानका नेता जिल्ला प्रहरी लगिए
दमक , २५ साउन ः निमार्ण व्यवसायी संघको विर्तामोड कार्यालयमा तोडफोड गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका लिम्बुवान भोलेन्टिर्यर्सका क्षेत्रिय संयोजक सम्सेर लिम्बुलाई अनुषन्धानका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ ।
दमक प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनलाई गए राती नै जिल्ला पठाइएको हो । उनी र उनको समूहले संघको कार्यालय तोडफोडमा जान प्रयोग गरेको मे १ ख ७४२ नम्वरको जिप भने धनीलाइ फिर्ता दिइएको छ ।
हिजो टेक्सी व्यवसायीले दमकमा चक्का जाम गरी विरोध गरेपछि प्रहरीले फिर्ता दिएको हो । चन्दा दिने विषयमा कुरो नमिलेपछि लिम्बुवान कार्यकर्ताले निमार्ण व्यवसायीको कार्यालयमा आक्रमण गरि तोडफोड गरेका थिए ।
भुटानसँग वार्ता गर्न शरणार्थीको आग्रह
दमक , २५ साउन भुटान मानव अधिकार संगठनले शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका लागि भुटान सरकारस“ग वार्ताको पलह थाल्न नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रासद कोईराला समक्ष आग्रह गरेको छ ।
संगनठले शनिवार प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अपिल पर्ठाई त्यस्तो आग्रह गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष एसबी सुब्बाले पठाएको अपिलमा मा पन्ध्रौ र्सार्क सम्मेलनका क्रममा भुटानका प्रधानमन्त्रीस“ग भएको वार्ता बमोजिम तत्काल वार्ता थाल्न भुटानलाई आग्रह गर्न अपिलमा माग गरिएको छ ।
अपिलमा शिविरमा रहेका तर स्वदेश र्फकन इच्छुकहरुका लागि स्वदेश फिर्तीको प्रकृयाका लागि नेपाल भुटानको उच्चस्तरिय वार्ता शुरु गर्न भनिएको छ । अपिलमा शिविरको बर्साई झन भन्दा झन कठिन मोडमा पुगेकोपनि उल्लेख छ ।
श्रीलंकामा भएको र्सार्क सम्मेलनमा नेपाल र भुटानका प्रधानमन्त्रीबीच शरणार्थी समस्या समाधानको बाटो खोज्ने विषयमा अबरुद्ध वार्ता सुचारु गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । भुटानले आफ“पनि वार्ताका लागि सकारात्मक भएको जनाएको थियो ।
शरणार्थी समस्या सुल्झाउने विषयमा नेपाल र भुटानबीचको वार्ता लामो समय देखि अबरुद्ध छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 5:22 AM No comments:
Let's privatise medical science
The investment on medical science by government of Nepal is worthless not only for country but also for society and its tax payers. We see the most unethical professionals in Nepal are the Doctors. If you find anyone who is seeking for the study of medical science and probably going to NAME or SACHDEVAA seems very patriotic. S/he talks about country's situation, curses political leaders and gives lectures on patriotism and humanity. S/he argues that s/he is ready to work anywhere in Nepal (probably even in Rukum, Rolpa) if s/he is provided opportunity to study in medical science. S/he talks about fair system of merits and opposes the system of capitalist society whereastudent only from rich family can learn in medical science. When s/he passes in entrance examination, s/he starts to change his/her tuning. S/he ignores the examination of Nepal medical council and starts to study for US MLA. He closes the eyes on the news about the dying people in remote Nepal (probably the districts that s/he was committed to serve before his study) due to lack of doctor's care and throws on the announcement about PR in US, Aus or Canada. S/he again starts to curse Nepali society and its pay roll system and say that to work in Nepal means to undervalue his education. Now s/he forgets his initial objectives and humanity. We couldn't find any try from youth doctors to change our society from conventional to new one that s/he wishes. Thanks goes only to Drs Aruna Upreti, Arun Sayami and very few others who are continuously compensating their tax payers who had invested to their study and serving their motherland. So what does the investment in medical science mean toatax payer—apoor Nepali people? It is "Hatti aayo hattai aayo fussaa" or Kagalai belpakyo harsa na bismaat". I don't mean that the view points of current doctors are incorrect. Yes, it his individual liberty to choose profession and place where s/he likes to stay. Any one is free to decide about own's future. But I mean that government investment is not necessary more in this field. Ifadoctor financed by government of Nepal serves to the people of Canada or US it doesn’t make sense to poor Nepali. Better, let's privatize all medical education in Nepal. So the only who are able to invest can study. And so no moral and ethical HANGS remain to 'would be' doctors. pls send to doctors you know
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 3:34 AM2comments:
लिम्बुवानद्धार घर कब्जा
लिम्बुवान भोलेन्टियर्सले झापाको दमकमा दुइ वटा घर कब्जा गरेका दाबी गरेका छन् । यो संगठन सघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सँग आबद्ध छ ।
दमक १० स्थित एक तले घर र दमक १ बस्ने उर्मिला योङहाङको घर कब्जा गरेको संगठनका उपसंयोजक तेन्दोङले बताए ।
ती घर नेपाल बैक र बाणिज्य बैकको लिलामीमा परेका सरकारी संम्पती हुन् ।
जनजातिको माग पुरा गर्न आग्रह
आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार संवैधानिक रुपमा संस्थागत गरिनुपर्ने आज झापाको दमकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाती पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ र वर्तमान अवस्था विषयक छलफलमा बोल्दै वक्ताले जनजातिको अग्राधिकारको ग्यारेण्टी कानुनी रुपमा अब बन्ने संविधानमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोलदै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले विगतमा जनजाति माथि भएको दमनको क्षतिपूर्ति स्वरुप उनीहरुको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उहाँले जल, जंगल र जमिनमा जनजाति आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम राज्यको हो भने ।
कार्यक्रममा किराँत याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय सदस्य धिरेन लावती, तराई आदिवासी जनजातिहरुको एलायन्सका अध्यक्ष कुन्जीविहारी ताजपुरिया, आदिवासी जनजाति पत्रकार संघका झापा उपाध्यक्ष बिष्णु सुब्बा र अधिवक्ता मकवान सुब्बाले पनि बोलेका थिए ।
सहमति कार्यान्वयन भएन
झापाको दमकमा संचालित होटल तथा रेष्टुरामा हुने गरेको यौनजन्य क्रियाकलाप रोक्न समिति गठन गरि काम थाल्न गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
साता अघि इलाका प्रहरी दमकमा भएको सर्वपक्षिय छलफलले एक समिति गठन गरि तत्कालै काम थाल्ने सहमती गरेको थियो । तर काम शुरु हुन नसकेको बताउँदै प्रहरी निरिक्षक गोविन्दराज काफ्लले यस विषयमा पुन छलफल चलाईने बताए ।
दमकका होटल र रेष्टुरामा यौन व्यापार हुने गरेको जनगुनासो आएपछि प्रशासनले र्सतकता बढाएको थियो । यस क्रममा केही होटलमा छापा समेत मारिएको थियो ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 3:18 AM No comments:
झापा बन्द खुल्यो
तीन दिन देखी जारी झापा बन्द आजैबाट खुला गर्ने सहमती भएको छ । दमकमा केहीबेर अघि संम्पन्न र्सवपक्षिय छलफल पछि बन्द खुला गर्ने सहमती भएको हो । छलफलमा सहभागी नेपाल रेडक्रस उपशाखा दमकका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले बन्द खुला गर्न र पक्राउ परेका सुकुम्वासीलाई छाड्ने सहमती भएको जानकारी दिनु भयो ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 3:29 AM No comments:
झापा बन्द खुलाउन वार्ता हुदैं
झापाको दमकमा भईरहेको र्सवपक्षिय छलफलमा बन्द खुलाउने विषयमा सहमती हुन सकेको छैन् ।
अहिले अपरान्ह शुरु भएको छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहित प्रहरी र अधिकारकर्मीका प्रतिनिधि सहभागि छन् ।
छलफलमा गौरादहमा माओवादी र्समथित कांग्रेसका क्षेत्रिय सभापति सियाराम राजवंशीलाई कुटपिट गरिएको विषयमा खेद प्रस्ताव पारित गर्न पर्ने माग राखिएपछि वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन् ।
र् र्सवपक्षिय छलफलको मध्यस्तता गरिरहेको नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य डा. केपी सुवेदीले वार्ता प्रतिनिधिमुलक बनाएर अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
एकजना सहभागिले आजको वार्तामा बन्द बजार र यातायात खुलाउने विषयमा सहमति जुटेपनि पक्राउ कार्यकर्ताको विषयमा भने के हुने भन्ने निश्चित नरहेको जानकारी दिएका छन् ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 12:58 AM No comments:
पुनर्स्थापना पछि अमेरिकामा शरणार्थीको एउटा परिवार र उनीहरु बस्न त्यहाँको सरकारले दिएको घर ।
झापाको दमक स्थित बेलडाँगी शिविरमा आफ्नो छाप्रो नजिकै उभिएका शरणार्थीहरु ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 3:22 AM No comments:
बन्दले झापामा जनजीवन प्रभावित
दमक : झापाको पश्चिमी ग्रामीण भेगमा पा“च दिन देखि जारी यातायात बन्दका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
जिल्लाको दमक हुदैं गौरादह, गौरीगन्ज, बैगुन्धुरा लगायत ग्रामीण भेगसम्म चल्ने यातायातका साधान शनिवारबाट ठप्प छन् ।
गौरादहमा सुकुम्वासी र स्थानिय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको विवादका कारण त्यस क्षेत्रमा यातायातका साधन बन्दगराइएको हो .
दर्जनको संख्यामा चल्ने जीप र त्यतीकै संख्याका मिनी बसहरु गौरादह गौरीगन्ज सडकमा नगुडेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । त्यस क्षेत्रमा विद्यलाय तथा कलेजहरुपनि बन्द छन् ।
काग्रेंसका स्थानिय नेता सियाराम राजंवशी र सुकुम्वासीको विवादले राजनीतिक रुप लिएपछि गौरादहको यातायात बन्दलाई बुधवारबाट आम हड्ताल बनाइएको छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले पक्राउ कार्यकर्तालाई नछाडिन्जेल आम हड्ताललाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष कविराज गौतमले बुधवारबाट आम हड्ताल शुरु गरिएको बताए ।
कांग्रेसका स्थानिय नेता सियाराम राजवंशीलाई दुरव्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गौरादह ३ का गोपाल मिझार, सावित्रा मिझार, कलुवा ताजपुरिया र मिक्नी धिमाललाई र्सार्वजनिक अपराध ऐन अर्न्तगत मुद्धा चलाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी निरिक्षक गोविन्दराज काफ्लेले बताएका छन् ।
यसैबीच बन्दका कारण बुधवारपनि झापाको ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । झापाको दमकमा यातायात, बजार र शिक्षण संस्था पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । बन्दकर्ताले ठाउँ ठाउँमा सडकमा अवरोध गरेका छन् ।
दमकको रतुवा पुलमा बन्दकर्ताले मोटरर्साईकलका चाबी थुतेपछि सयौं संख्यामा मोटरर्साईकल चालक अलपत्र परेका छन् । बन्दकर्ताले विर्तामोड लगायत स्थानमा पनि नारवाजी र जुलुस गरेका छन् ।
यसैबीच दुइ दिन देखिको झापा बन्दका कारण दमकमा लाग्ने साप्ताहिक पशु बजार प्रभावित बनेको छ ।
बजारमा बस्तु भाउको किनवेच घटेको व्यवसायीले बताएका छन् । कतिपय व्यापारीहरुले बस्तु भाउ बजारसम्म ल्याइएपनि किनवेच भने हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
भारत दरभंगाबाट बस्तु किनवेच गर्न आएका प्रकास यादवले आज अपेक्षित रुपमा कारोवार हुन नसकेको बताए ।
उनी जस्तै तोपगाछीका व्यापारी नन्दुराम लिम्बुले पनि बस्तुको किनवेच आज ठप्प प्राय रहेको जानकारी दिएका छन् ।
पूर्वान्चलकै ठूलो मानिने दमकको पशुबजार यस वर्ष ५० लाख रुपैया“मा नगरापालिकाले ठेक्का लगाएको हो ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 2:36 AM No comments:
पाँचथरको पौवाभन्ज्याङमा आफूँ जत्तिकै भारी घास बोकेर घर फर्कदै गरेका बालक । विद्यालय जाने उमेरका यी बालक आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले घाँस दाउरामै व्यस्त रहने गरेका छन्
तस्वीर कुमार लुइटेल
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 4:13 AM 1 comment:
प्रहरीलाई कालो मोसो
दमक/झापाको महाभारामा कार्यरत एक प्रहरीलाई स्थानियबासीले कालोमोसो दली गाउँ घुमाएका छन् ।
महाभारा प्रहरी चौकीमा कार्यरत गोकुल रानालाई स्थानियबासीहरुले पक्राउपरेका युवालाई छोडेको भन्दै गाउँ घुमाएका थिए ।
गाउँका ६ जना फटाहा युवालाई स्थानियबासीहरुले पक्रिएर शुक्रबार प्रहरी चौकी पुर्‍याएको भोलिपल्ट शनिबार उनीहरुलाई छोडेको बिरोधमा प्रहरी चौकी घेरा हालि कालोमोसो दलेका थिए ।
घटनाको विरोधमा आज दुधे महाभारा कु्न्जीवारी सडकमा यातायात सेवा बन्द छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 3:55 AM No comments:
शरणार्थी मुद्धा र्सार्कमा उठाउन आग्रह
दमक भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितीले र्सार्कमा सम्मेलनमा शरणार्थी समस्याको विषयमा छलफल चलाई समाधानको बाटो खोजिनु पर्ने माग अघि सारेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष डा भम्पा र्राईले आज प्रेस विज्ञप्ती प्रकासित गरि शरणार्थी समस्या समाधानका लािग उपाय खोज्न सम्मेलनमा छलफल चलाइनु पर्ने जनाएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भुटानले आफ्ना नागरिकहरुको चल अचल संम्पती जफत गरि जिए ज्यानको असुरक्षा र अमानविय व्यवाहार गरेकोले हज्जारौं नागरिक शरणार्थी बन्न बाध्य भएको उल्लेख छ ।
काठ समाउ“दै युथ फोर्स
दमक ःएमाले निकट युथ फोर्सले झापाको दमक १३ बाट शनिवार अवैध काठ बरामद गरेको छ ।
सुराकीको आधारमा बेलडा“गी रेन्ज पोष्टका कर्मचारी र युथ फोर्सका कार्यकर्ताले काठ नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
त्यहा“ एउटा ट्याक्टरमा लुकाई राखिएको अवस्थामा सात टुना काठ बरामद भएको हो ।
ट्याक्टर भने दमकका देउमान सुब्बाको भएको रेन्ज पोष्टले जनाएको छ । तीन दिन अघिपनि दमक प्रहरीले ठूलो परिमाणमा काठ बरामद गरेको थियो । यसैबीच प्रहरीले पक्राउ गर्ने काठ छाड्न राजनीतिक दलबाट दबाव आउन थालेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 3:40 AM No comments:
गरिव सन्थालका करेसामा कहिले बन्ने पाईखाना............
धरमपुरमा बालिका अपहरित दमक/पा“च दिन देखि बेपत्ता भ...
अहिले पुनर्स्थापना पछि ...
पाँचथरको पौवाभन्ज्याङमा आफूँ जत्तिकै भारी घास ...